Vaovao - Fametahana tombo-kase mekanika
Tady tombo-kase varavarana sy varavarankely
Tady tombo-kase fanamboarana
Tady tombo-kase fiarovana
Tombo-kase varavarana kabinetra
Tavoahangy vita amin'ny kofehy
Fehin-kibo vita amin'ny paty
Tady famehezana mekanika
Fametahana tombo-kase mekanika
Ny fomba fametrahana ny tombo-kase mekanika dia miovaova arakaraka ny karazana tombo-kase mekanika sy ny karazan'ilay milina, saingy ny zava-dehibe ilaina amin'ny fametrahana dia saika mitovy. Ny tombo-kase mekanika dia iray amin'ireo singa mekanika fototra miaraka amina rafitra marina sy sarotra. Ireto ny dingana fametrahana sy fitandremana:
1. Fivoriamben'ny faritra mijanona amin'ny tombo-kase mekanika:
a. Atsofohy ao anaty lavaka mifanaraka amin'ny fonony farany ny famehezana;
b. Apetaho amin'ny peratra static ny peratra tombo-kase peratra, apetaho ao anaty fonony farany ny peratra static, ary tandremo mba hahatonga ny pin rotation anti-rotation hiditra ao amin'ny faritry ny peratra static. Rehefa mametraka ny fihary ao dia tandremo mba tsy hikasika ny vatan-kazo miolakolaka - tokony hohamafisina tsara ny bolt imbetsaka.
2. Fivoriamben'ny faritra mihodina amin'ny tombo-kase mekanika: atambaro tsirairay ny ampahany mihombo amin'ny tombo-kase mekanika eo amin'ny zana araka ny filaharana. Raha misy tanany hazo, ny ampahany mihodina amin'ny tombo-kase mekanika dia tokony hivory eo amin'ny sandrin-tànana, ary avy eo ny zana-kazo mihodina miaraka amin'ireo faritra mihodina amin'ny tombo-kase mekanika dia tokony hapetraka eo amin'ilay hazo.
3. Apetaho amin'ny vatan'ny famehezana ny fonony farany ary hamafiso tsara amin'ny visy.
4.Na mora ny fitsapana kapila, raha tsy mihetsika na mafy ny kapila, dia zahao raha marina ny haben'ny fivoriambe. Fomba fametrahana:
(1) Hamarino raha marina ny maodely, ny famaritana ary ny ampahany amin'ny tombo-kase mekanika hapetraka.
(2) Hamarino raha simba avokoa ny singa rehetra amin'ny tombo-kase mekanika, indrindra raha simba ny tarehy mifehy ny peratra mihetsiketsika sy ny peratra static. Raha misy fahasimbana hita dia amboary na soloo ireo faritra vaovao. Ireo singa famehezana rehetra dia hodiovina amin'ny lasantsy na amin'ny solitany mba hitazonana ny fisian'ireo singa tsy misy vovoka sy raharaha ivelany.
(3) Na misy marika burr sy groove eo ambonin'ny vatan-kazo na tanany, ny rindrina anatiny misy lavarangana famehezana ary ny atin'ny fonony farany misy famehezana. Raha misy burr na groove hita dia tokony hohosorana, kosehina, diovina amin'ny lasantsy na solika, ary diovina amin'ny fofona madio sy malefaka, landihazo mpitroka ary zavatra hafa. Mba hahamora kokoa ny fametrahana azy, ny menaka dia tokony hapetraka eo ambonin'ny tampon'ny zana-kazo na ny zoro ary ny faritry ny fihary ao sy ny peratra fanisiana tombo-kase mba hisorohana ny fikorontanana maina amin'ny fotoana manomboka.
Fotoana fandefasana: Jan-27-2021
ADDRESS: 1-1-601, tian Kuo Shang Cheng, Ye Jin North Road, Xingtai, Hebei, Sina